လိပ်ရွှေရွှေ၊ခေါင်းအုန်းမုန့်နဲ့ ငယ်ဘဝမုန့်တွေ ပြန်စားရတော့မယ့် ကန်တော်ကြီးထဲကဆိုင်လေး
21 Sep 2018 . 6:06 PM
ကိုယ်တို့ ၉၀ဖွားတွေအတွက် ငယ်ငယ်တုန်းက ဘဝတွေဟာ လွမ်းစရာပါ။ လျှပ်စစ်မီးတွေ မလုံလောက်သေးတဲ့အချိန်၊ ခေတ်မီနည်းပညာတွေမထွန်းကားသေးတဲ့ ၉ဝပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ဟာ ဘယ်ချိန်အတွေးနဲ့ပြန်သွားသွား လွမ်းမောစရာ စိတ်ကူးထဲက ပျော်စရာအိမ်မက်ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးတွေရယ်ပါ။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက စားခဲ့ရတဲ့မုန့်လေးတွေကလည်း ခုချိန်ပြန်စားချင်လွန်းလို့ရှာရင်တောင် ရွှေထက်ရှားနေပြီလေ။ အဲ့လိုလွမ်းကောင်းကောင်းနေရင်း ဟိုးတနေ့က အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်ရဲ့ ဇနီးချောလေး မဇုံဇုံက တင်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးမြင်ပြီး အပြေးသွားရှာတော့မှ…
တွေ့ပါပြီဗျား…ငယ်ဘဝတို့ရဲ့ လွမ်းမောစရာ စားစရာလေးတွေက ကန်တော်ကြီး ကရဝိတ်ပန်းခြံထဲမှာ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဆိုင်လေးနဲ့ ရှိနေတာကိုး။
ပေတံနဲ့ အိတ်ကိုခြစ်ပြီး တစ်စိမှမကျန်အောင်စားခဲ့ရတဲ့ လိပ်ရွှေရွှေ၊ မွှေးဆိမ့်နေဆဲ ခေါင်းအုန်းမုန့်၊ ထန်းလျက်ချောင်း၊ ဘီစကစ်တွေ၊ ပုစွန်မုန့်တွေ၊ ငုံးဥသကြားလုံး၊ အုန်းပီကေ၊ အုန်းယို၊ အနုဆုပ်၊ မရွေး၊ ကြက်ဥမြေပဲ၊ လှဉ်းယာဉ်ဇီးတော်ဖီ၊ ကျားမုန့်တိုက်က အငံမုန့်နဲ့ ဘဲဥပေါင်းမုန့်တွေ၊ ကြာဆံမရွေး….အိုးးးစုံလို့ စိလို့ အဲ့မုန့်လေးတွေကြည့်ရင်း သဘောတွေကျရင်း ခနလေး ကိုယ် ကလေးပြန်ဖြစ်သွားသလိုပဲ။
ဒီခေတ်ကလေးတွေ သိပ်မသိတော့ပေမယ့် ကိုယ်တွေအတွက်တော့ တကယ့်ရတနာသိုက်လေးတစ်ခုလိုပါပဲ။
ပြီးတော့ ဗမာ့အစားအစာတွေကိုအဓိကထားရောင်းတာဆိုတော့ ကိုယ့်လူမျိုးကထုတ်တဲ့ Export Traditional Foods တွေကို ဂုဏ်ယူယူနဲ့ ကြွားလို့ရပြီ။ အမယ်..ကျောက်ပန်းတောင်းမေရီချိုအာလူးကြော်နဲ့ မြန်မာချောကလက်တွေတောင်ပါသေး။ ချောကလက်တံဆိပ်က Mingalarpar တဲ့ ။ Wine တွေလည်း ရောင်းတယ်။
ပြီးတော့ တစ်မြို့လုံးရှာရခက်တဲ့ နို့ဝေဖာတွေလည်း ဒီမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အခရာ ကတော့ ငယ်ငယ်ကမုန့်တွေမြင်တာနဲ့ကို ငယ်မူပြန်ပြီး ပီတိတွေနဲ့ ဟော့တစ်ထုပ်ဟော့တစ်ထုပ်ဆိုပြီး ဆွဲဝယ်ခဲ့တာပဲ။
ဆိုင်လေးက သန့်ပြန့်နေပြီး အစားအသောက်တစ်ဖက်၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ချည်ထည်နဲ့အိတ်၊ ပုဝါ၊ အဝတ်အစား Brand တွေတွဲရောင်းတာဆိုတော့ အကျယ်ကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေကအစားတလိုင်းဆိုတော့ မုန့်တွေရွေးဝယ်ခဲ့တယ်။ ဈေးကတော့ တန်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စားပျော်တယ်။
ဝန်ထမ်းညီမလေးတွေလည်း သဘောကောင်းတယ်။ ယိုအမြည်းတွေလည်း ကျွေးသေးတယ်။ ခြုံငုံပြောရရင် တကယ် ငယ်ဘဝတွေဆီ၊ အတိတ်နေ့တွေဆီခနလေးပြန်ပို့ပေးတဲ့ စားစရာဆိုင်လေးပါပဲလို့..
ကန်တော်ကြီးထဲရောက်ရင် ကရဝိတ်ထဲသွားပြီး Karaweik Arts and Craft ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာ ငယ်ငယ်တုန်းကမုန့်လေးတွေဝယ်ပြီး ငယ်ဘဝအရသာပြန်ခံစားခဲ့ပါဦးလို့…
အခရာကတော့ ကိုယ်စားချင်တဲ့မုန့်တွေကများလွန်းတော့ နောက်တခါသွားဝယ်ဦးမယ်အားခဲပြီးပုံလေးတွေပဲ အဝရိုက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ငယ်ဘဝအလွမ်းပြေမုန့်လေးတွေကို ရှာကြည့်လိုက်ဦးနော်။
အဲ့ဒီ့နေ့က မိုးတွေခပ်သည်းသည်းရွာနေတဲ့ သာမန်အင်္ဂါနေ့ညနေလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားထဲမှာတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကအမှတ်တရတွေ စိတ်ထဲတအုံ့နွေးနွေးဖြတ်ပြေးရင်း ပြန်မရတော့တဲ့ အတိတ်က ကလေးလေးဘဝပြန်ရောက်ခဲ့သေးတယ်လေ။
လိပျရှရှေေ၊ခေါငျးအုနျးမုနျ့နဲ့ ငယျဘဝမုနျ့တှေ ပွနျစားရတော့မယျ့ ကနျတျောကွီးထဲကဆိုငျလေး
ကိုယျတို့ ၉၀ဖှားတှအေတှကျ ငယျငယျတုနျးက ဘဝတှဟော လှမျးစရာပါ။ လြှပျစဈမီးတှေ မလုံလောကျသေးတဲ့အခြိနျ၊ ခတျေမီနညျးပညာတှမေထှနျးကားသေးတဲ့ ၉ဝပွညျ့နှဈဝနျးကငျြဟာ ဘယျခြိနျအတှေးနဲ့ပွနျသှားသှား လှမျးမောစရာ စိတျကူးထဲက ပြျောစရာအိမျမကျခပျနှမျးနှမျးလေးတှရေယျပါ။
အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက စားခဲ့ရတဲ့မုနျ့လေးတှကေလညျး ခုခြိနျပွနျစားခငျြလှနျးလို့ရှာရငျတောငျ ရှထေကျရှားနပွေီလေ။ အဲ့လိုလှမျးကောငျးကောငျးနရေငျး ဟိုးတနကေ့ အဆိုတျောဟနျထူးလှငျရဲ့ ဇနီးခြောလေး မဇုံဇုံက တငျထားတဲ့ ဆိုငျလေးမွငျပွီး အပွေးသှားရှာတော့မှ…
တှပေ့ါပွီဗြား…ငယျဘဝတို့ရဲ့ လှမျးမောစရာ စားစရာလေးတှကေ ကနျတျောကွီး ကရဝိတျပနျးခွံထဲမှာ တဈစုတဈဝေးတညျး ဆိုငျလေးနဲ့ ရှိနတောကိုး။
ပတေံနဲ့ အိတျကိုခွဈပွီး တဈစိမှမကနျြအောငျစားခဲ့ရတဲ့ လိပျရှရှေေ၊ မှေးဆိမျ့နဆေဲ ခေါငျးအုနျးမုနျ့၊ ထနျးလကျြခြောငျး၊ ဘီစကဈတှေ၊ ပုစှနျမုနျ့တှေ၊ ငုံးဥသကွားလုံး၊ အုနျးပီကေ၊ အုနျးယို၊ အနုဆုပျ၊ မရှေး၊ ကွကျဥမွပေဲ၊ လှဉျးယာဉျဇီးတျောဖီ၊ ကြားမုနျ့တိုကျက အငံမုနျ့နဲ့ ဘဲဥပေါငျးမုနျ့တှေ၊ ကွာဆံမရှေး….အိုးးးစုံလို့ စိလို့ အဲ့မုနျ့လေးတှကွေညျ့ရငျး သဘောတှကေရြငျး ခနလေး ကိုယျ ကလေးပွနျဖွဈသှားသလိုပဲ။
ဒီခတျေကလေးတှေ သိပျမသိတော့ပမေယျ့ ကိုယျတှအေတှကျတော့ တကယျ့ရတနာသိုကျလေးတဈခုလိုပါပဲ။
ပွီးတော့ ဗမာ့အစားအစာတှကေိုအဓိကထားရောငျးတာဆိုတော့ ကိုယျ့လူမြိုးကထုတျတဲ့ Export Traditional Foods တှကေို ဂုဏျယူယူနဲ့ ကွှားလို့ရပွီ။ အမယျ..ကြောကျပနျးတောငျးမရေီခြိုအာလူးကွျောနဲ့ မွနျမာခြောကလကျတှတေောငျပါသေး။ ခြောကလကျတံဆိပျက Mingalarpar တဲ့ ။ Wine တှလေညျး ရောငျးတယျ။
ပွီးတော့ တဈမွို့လုံးရှာရခကျတဲ့ နို့ဝဖောတှလေညျး ဒီမှာတှခေဲ့တယျ။ အခရာ ကတော့ ငယျငယျကမုနျ့တှမွေငျတာနဲ့ကို ငယျမူပွနျပွီး ပီတိတှနေဲ့ ဟော့တဈထုပျဟော့တဈထုပျဆိုပွီး ဆှဲဝယျခဲ့တာပဲ။
ဆိုငျလေးက သနျ့ပွနျ့နပွေီး အစားအသောကျတဈဖကျ၊ မွနျမာ့ရိုးရာ ခညျြထညျနဲ့အိတျ၊ ပုဝါ၊ အဝတျအစား Brand တှတှေဲရောငျးတာဆိုတော့ အကယျြကွီးပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျတှကေအစားတလိုငျးဆိုတော့ မုနျ့တှရှေေးဝယျခဲ့တယျ။ ဈေးကတော့ တနျတယျဆိုတဲ့ထဲမပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စားပြျောတယျ။
ဝနျထမျးညီမလေးတှလေညျး သဘောကောငျးတယျ။ ယိုအမွညျးတှလေညျး ကြှေးသေးတယျ။ ခွုံငုံပွောရရငျ တကယျ ငယျဘဝတှဆေီ၊ အတိတျနတှေ့ဆေီခနလေးပွနျပို့ပေးတဲ့ စားစရာဆိုငျလေးပါပဲလို့..
ကနျတျောကွီးထဲရောကျရငျ ကရဝိတျထဲသှားပွီး Karaweik Arts and Craft ဆိုတဲ့ဆိုငျလေးမှာ ငယျငယျတုနျးကမုနျ့လေးတှဝေယျပွီး ငယျဘဝအရသာပွနျခံစားခဲ့ပါဦးလို့…
အခရာကတော့ ကိုယျစားခငျြတဲ့မုနျ့တှကေမြားလှနျးတော့ နောကျတခါသှားဝယျဦးမယျအားခဲပွီးပုံလေးတှပေဲ အဝရိုကျခဲ့တယျ။ ကိုယျ့ငယျဘဝအလှမျးပွမေုနျ့လေးတှကေို ရှာကွညျ့လိုကျဦးနျော။
အဲ့ဒီ့နကေ့ မိုးတှခေပျသညျးသညျးရှာနတေဲ့ သာမနျအင်ျဂါနညေ့နလေေးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ ငယျငယျတုနျးကအမှတျတရတှေ စိတျထဲတအုံ့နှေးနှေးဖွတျပွေးရငျး ပွနျမရတော့တဲ့ အတိတျက ကလေးလေးဘဝပွနျရောကျခဲ့သေးတယျလေ။
နုပျိုခြင်းတွေကို ယူဆောင်လာပေးမယ့် အစားအစာတွေ
by Ngul Ciin .4hours ago
စားမလား သောက်မလား လေညင်းခံစရာ Bar အမိုက်စားကြီးနဲ့ နှစ်မျိုးမိုက်နေတဲ့ Chinese 47 Restaurant
by Lwin Moe Htike .3days ago
သားသားမီးမီးတွေကို သရက်သီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား မုန့်တွေလုပ်ကျွေးကြမယ်
by Ngul Ciin .6days ago
ဖက်ထုပ်ကို အသေဆွဲမယ့် ဖက်ထုပ်သရဲတွေအတွက် ဈေးတန်တန်နဲ့ အရသာရှိရှိစားလို့ရမယ့် ဖက်ထုပ်ဟောက်စ်
by Lwin Moe Htike .6days ago
လက်ဘက်ရည်လေးသောက်ပြီး နားအေးပါးအေး Chill ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတို့အတွက် ခေတ်မြန်မာ တီးဟောက်စ်
by Lwin Moe Htike .2weeks ago
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်သိမ်းမယ့် စားစရာတွေရဲ့ သိုလှောင်ချိန်